Wararkii ugu dambeeyay Xildhibaan Lagu dilay Gaalkacyo iyo Puntland oo ka hadashay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Wararkii ugu dambeeyay Xildhibaan Lagu dilay Gaalkacyo iyo Puntland oo ka hadashay
Gaalkacyo ( Kalshaale ) Ciidamada ammaanka Puntland ayaa howlgal ay ku raadinayaan dadkii ka dambeeyay dilka Mukhtaar Axmed Cumar (Tinle) kawada Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug.
Xildhibaankan oo katirsanaa Golaha Deegaanka Magaalada Gaalkacyo, ayaa Xalay lagu dilay waqooyiga magaalada Gaalkacyo .
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur ayaa ka hadlay dilka xildhibaan Mukhtaar Axmed Cumar (Tinle), ayaa sheegay in marxuumka uu sidoo kale ahaa ganacsade, islamarkaana ay dishay gacan ka xaq-daran, Wuxuuna sheegay inay Ciidamadu wadaan Baadhitaan.
“Mukhtaar waxa uu ahaa Xildhibaan, sidoo kale waa Ganacsade, waxaa dishay Gacan ka xaq daran, waxaana dilkiisa ka dambeeyo dad caadeystay beegsiga dadka Bulshada wax u qabta, balse Ciidamada ammaanka ayaa ku daba-joogo oo aan ka quusan doonin soo qabashada gacan ku dhiiglayaasha” ayuu yidhi guddoomiyaha Gobolka Mudug.
Ammaanka guud ee magaalada Gaalkacyo ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ahaa mid liitay, waxaana ka dhacayey falal liddi ku ah amniga oo u badan dilal qorsheysan, Waxaana la sheegay in Ragga dilka geystay ee hadda la raadinayo ay dhaawaceen askari ka tirsanaa ciidanka ammaanka ee maamulka Puntland.